Ku guuleysta Kuwa raacsan Joogtada ah ee leh Profamous Pro ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
Ku kasbato taageerayaal cusub oo joogto ah barnaamijka 'Instafamous Pro'
November 10, 2019 0 comments 529
Bogga Instagram, waxkasta maahan sida ay umuuqdaan, laga soo bilaabo moodooyinka iyo qarsoodigooda madow ee shaandhaynta iyo xaglaha ilaa koonto xisaabeedyo culus ama Tirada dadka raacsan.
In kasta oo ay suurta gal noqon karto in la helo saldhig faneed ballaaran oo leh jaangooyooyin iyo tayo tayo leh, waxaa sidoo kale run ah in celceliska qofka ay ku adag tahay inuu gaaro.
Haddii aan ku soo darno tan oraahdii hore ee ahayd "lacag wicitaan lacag" oo aan wax ka beddeli karno "Kuwa raacsan waxay ugu yeedhaan kuwa raacsan" waxay u badan tahay macquul in raacdo badan, is dhex galka iyo cinwaannada tirada kuwa raacsan ee aad ururineyso ay dhakhso u kordhaan.
Kaliya waxaan rabaa inaan noqdo shaybar
Sida wax kasta oo nolosha ka mid ah, marwalba u muuqda gaagaaban, oo waxaa jira bogag aan tirneyn oo kuu sheegaya inaad ku guuleysato waxyaabaha aad jeceshahay iyo kuwa raacsan (qaarkood shaqada qaarna kuwa kale ma qabtaan) runtu waxay tahay in inta badan ay kaa codsadaan magacaaga iyo isweydaarsigaaga Instagram inaad raacdo isticmaaleyaasha kale adiga oo aan ka warqabin waxa abuuraya aaminaad la'aan
Waad iska ilaawi kartaa taas oo leh "Instafamous Pro", kaas oo haddii aan ku sharrixi lahaa ereyada 3 ay kuwan noqon lahaayeen dhaqaale, wax ku ool ah oo la isku halleyn karo.
Instafamous Pro, oo leh istiraatiijiyad sahlan oo wax ku ool ah, ayaa ku siinaysa inaad ku darto koontadaada saacado ilaa maalmo ah (waxay kuxirantahay tirada dadka raacsan ee aad iibsaneyso) raacayaal dhab ah, lacag bixinta iyada oo loo marayo Paypal iyo a dammaanad qaad soo celinta lacagtaada haddii aadan ku qanacsaneyn adeegga iyo adigoon lahayn inaad soo gudbiso lambarkaaga eraygaaga sirta ah ee Instagram Maxaad kaloo rabi laheyd?
1 Iibsashada kuwa raacsan
2 Maxuu bixiyaa Instafamous Pro?
2.1 Xirmooyinka kuwa raacsan ee ku habboon baahi kasta
2.2 Akhyaarta dhabta ah
2.3 Kuwa Joogtada Ah
3 Natiijooyinka ayaa ka sarreeya wixii aad fileysey
3.1 Instafamous Pro News
3.2 Daabacaad yar
Iibsashada kuwa raacsan
Iibsashada kuwa raacsan runti waa mid sahlan, dhakhso leh oo aamin ah, tan kaliya raac talaabooyinkan:
Tag bogga Instafamous Pro
Buuxi dalabka kuwa raacsan, tani waxay bixisaa magacaaga, emaylka, isticmaaleha Instagram oo dooro tirada dadka raacsan ee aad rabto inaad iibsato
Guji "Ku Bixi PaypalIn la sii wado
Sidan, waxay kugu toosin doonaan bogga Paypal-ka halkaas oo ay tahay inaad ku gasho eraygaaga sirta ah si aad u soo gasho xaqiijinta aqoonsigaaga
Marka xigta, waxaa lagu tusi doonaa faahfaahinta iibsiga aad sameyneyso, taasoo muujineysa qaddarka la bixin doono, oo aad ku sameyn karto dheelitirka PayPal ama kaararka deynta sidoo kale lala xiriirinayo Paypal
Si aad usii waddo hawsha iibsiga guji badhanka "Bixi hadda"
Marka bixinta la dhammaystiro, waxaad ku noqon doontaa bogga “Instafamous Pro” halkaas oo lagu tusi doono faahfaahinta iibsashada: tirada amarka, tirada dadka raacsan kahor iibsashada, tirada dadka raacsan iibsashada, wadarta qiimaha dalabka, heerka lacag bixinta. iyo nambarka lacag bixinta ee Paypal (caddeyntan iibsashada waxay sidoo kale ku imaan doontaa emaylkaaga)
Markaad iibsato kadib waad tagi doontaa oo kaliya sug dhawr saacadood oo eeg sida tirada dadka raacsan ay si tartiib tartiib ah ugu kordhin doonto
Halkan waxaan ku tusayaa sida aan ku iibsanay soo iibsashada 1.000 raacayaasha mid ka mid ah akoonadayada Instagram
Maxuu bixiyaa Instafamous Pro?
Xirmooyinka kuwa raacsan ee ku habboon baahi kasta
A priori Instafamous Pro wuxuu bixiyaa kaliya kuwa raacsan, xirmooyinka ugu caansan waa 1k, 2,5K 5k iyo 10K kuwa raacsan qiimayaasha ugu jaban ee 10, 20, 35 iyo 60 doolarka Mareykanka, oo si cadaalad ah loo qiimeeyo tartamaya marka loo eego bogag kale, inkasta oo ay tahay hab kale oo lagu garto sida loo helo kuwa raacsan barta Instagram dhakhso.
Waxay sidoo kale bixisaa xirmooyin ilaa 1 milyan oo raacsan oo loogu talagalay 3.000 USD.
Akhyaarta dhabta ah
Waxyaabaha la soo bandhigo raacayaal dhab ahSidee Qandaraasyada wuxuu la leeyahay bogag kale si uu u helo kuwa raacsan, badiyaa kuwa leh hannaan ay raacaan dadka oo ay lacag kaga beddelaan qadaro si ay u helaan kuwa raacsan.
Bogaganani guud ahaanba waxay laxiriiraan 3 / 1 ama 2 / 1, taas oo ay tahay inaad raacdo laba ama saddax adeegsadeyaal ah si aad u kasbato dhibco ama qadaadiic si aad u hesho raacaya adiga cusub.
Proafamous Pro wuxuu dhigayaa astaantaada bogaggaan taageerooyinka si dadka dhabta ahi u raacaan astaantaada si ay u helaan qadaadiicadan.
Kuwa Joogtada Ah
Feejignaan ma ahan oo keliya ballan qaadayaashaada, laakiin sidoo kale ballan ayey kugu qaadaysaa way joogi doonaan, inkasta oo aysan ahayn, waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka ah inaad ku beddesho kuwa raacsan ee kaa lumay.
Sida habka loo raaco taageerayaasha Instafamous wuxuu maraa boggaga isweydaarsiga taageereyaasha, guud ahaan dadka adeegsada waxay raacaan tiro badan oo dad ah si ay u kasbadaan qadaadiic yar ka dib maalmo yar ka dib way joojiyaan inay iyaga gacantooda ka raacaan barnaamijka Instagram. .
Tani waxaa laga dheehan karaa inay tahay wax ku soo kordhay koontadaada Instagram, laakiin ha walwelin, maxaa yeelay haddii taasi dhacdo waad qori kartaa iyaga oo siin kartaa isticmaalehaaga Instagram iyo aqoonsiga dalabkaaga, way awoodaan Ku buuxi kuwa raacsan ee kaa lumay.
Natiijooyinka ayaa ka sarreeya wixii aad fileysey
Ka dib markii la iibsaday iibsiga xirmada 1.000 ee raacsan saacadaha 5 kaliya waxaan horeyba u soo qaatay inbadan oo ka mid ah kuwa raacsan yaboohay.
Sidaad arki karto, koonkan tijaabada wuxuu lahaa kaliya kuwa raacaya 80. Ka dib markaad sameysay iibsiga kuwa raacsan barnaamijka 'Instafamous Pro' aragtida ah ee raacsan XXX waa inay yimaadaan, taa bedelkeeda, waxaan hadda haystaa 1080 umuuqda kuwo dhab ah oo ku saleysan tirada iyo mowqifkooda.
Instafamous Pro News
Instafamous Pro sidoo kale waxay leedahay a blog taas oo dhajinaysa qodobbada la xiriira howlaha akoonnada Instagram, sida loo helo raacdo badan oo loo sii hayo oo waliba a qoraal kaas oo aad iska qori kartid si aad ugu dirto emaylkan emaylkaaga (haa, waxay ku qoran yihiin Ingiriis).
Sidii aan horayba u idhi, waxay u badan tahay in kuwa raacsan ee ku kasba qaabkan ay joojinayaan raacitaankayaga kadib dhowr maalmood ama toddobaadyo, in kastoo aan horeyba u ognahay in tan lagu xallin karo codsi yar oo lagu beddelayo kuwa raacsan.
Qodob kale oo looga soo horjeedo ayaa ah Ikhtiyaarka si aad u hesho kuwa raacsan ee ka socda gobolkaaga lama bixiyo, sidaa darteed kuwa raacsan ee aad heleyso daruuri umaheli doono luqaddaada ama xiisahaaga taasna waxay u horseedi doontaa iyaga inay u suura gasho inay ku siiso oo aan kula socon sidoo kale waxaad ogaan doontaa inaad ku soo kordhisay tirada dadka raacsan si dabiici ah.
Dhibaatada kale ee aad la kulanto ayaa ah in markii aad dalbanayso tiro fara badan oo taageerayaasha Instagram ah aad la kulmi karto u garto inay yihiin SPAM oo baabi'iya ama xitaa gaadha xannibi koontadaada si ku meelgaar ah, markaa waxaad adeegyadan wax yar ugu adeegsanaysaa xirmooyin yar yar oo waxaad ku qabataa dhowr maalmood inta u dhexeysa si aad uga fogaato xannibaadahaan.
Weligaa ma isticmaashay boggag isweydaarsiga taageere ama hab kale oo aad ku iibsato kuwa raacsan? AdigaMiyaad jeceshahay in la isku dayo Instafamous Pro? Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso, waad awoodaa qor ee faallooyinka.
Sida loo tirtiro koontada 'instagram'
Farqiga u dhexeeya Microinfluencers, Saameeyayaasha iyo Sharafta